Izao tontolo izao Warcraft Review | Solosaina Teknolojia Global Lahatsoratra Vohikala.WS | GVMG - Global Viral Marketing Group
Solosaina Teknolojia Global Lahatsoratra Vohikala.WS > Rehetra > Izao tontolo izao Warcraft Review
Izao tontolo izao Warcraft dia avy lavitra ny tsara indrindra sy lehibe indrindra MMORPG nivoaka mbola. Izao tontolo izao Warcraft izao manaraka izao tantara lava momba ny lazao ny fomba lalao warcraft. Nisy 3 malaza-boninahitra izay nivoaka teo aloha dia izay koa no iray tena goavana namely ny. [object Window], [object Window], Warcraft III sy ny 2 [object Window] “Ny Ady Mangatsiaka Throne” ary “Hanjaka ao ny Korontana”. Ny fanambarana ny daty ny lalao dia tamin'ny Novambra 23, 2004. Herintaona taty aoriana ny famoahana sy misy momba ny 4.5 tapitrisa ireo mpikambana ao amin'ny facebook ary mbola mitombo fatratra isan'andro izao tontolo izao wide. Izao tontolo izao Warcraft mandray anao ho 3D tontolo iainana Maneran-tany ny Azeroth. Izao Tontolo izao lehibe indrindra ny virtoaly tontolo iainana hatramin'izay noforonina. Azonao explor amin'ny alalan'ny an'efitra, ny ala, ny tendrombohitra sy ny maro hafa koa. Mety haharitra volana maro mialoha azonao hamaranana azy handeha amin'ny alalan'ny rehetra Azeroth. Misy mazava ho azy mounts toy ny soavaly, gryphons sy ireo biby hafa izay afaka manampy anao dia lavitra amin'ny alalan'ny Azeroth. Miaraka amin'ny lehibe 3D tontolo iainana azonao afaka hanamboarana ny marika dia any amin'ny avo indrindra amin'ny antsipirihany mandrakizay mety ho noforomporonina. Misy manaraka mba nisy olana tsy manam-fampiarahana ny endrika, ny maso, [object Window], ny habeny, ny lanjany, coloring hisafidy avy. Tsy tahaka ireo maro hafa MMORPGs, ianao&#8217;re mifamatotra nahita twin sy eroa fa ny mety hisian'ny lasa tsy voafetra amin'ny Blizzards marika ny famoronana. Izao tontolo izao Warcraft dia ahitàna 2 [object Window], ny Fiombonana sy ny Horde. Isaky ny realm mety hisafidy ny avy 4 amin'ny fiaviana samihafa. Alliance mpikambana mety hisafidy ny Olombelona, [object Window], [object Window], ary ny Gnomes raha ny Horde mpikambana mety hisafidy ny Orc, [object Window], Troll sy ny Undead. Miaraka amin'ny 8 foko nisy ihany koa ny 9 ny fampianarana fa mety hisafidy izay no Druid, [object Window], [object Window], [object Window], Pretra, [object Window], [object Window], Warlock sy Warrior. Isaky ny mpilalao ihany koa dia ny fahafahana hisafidy ny asa ataonao ho ny marika. Asa ataonao dia tena manampy ireo mpilalao toy izany dia mety manampy azy ireo hamorona lehibe armors, ny fitaovam-piadiana, zavatra hafa equipments. - Mpilalao mety hisafidy ny 2 ambaratonga voalohany professions ary ho maro ireo ambaratonga faharoa professions noho izy ireo toy ny. Blizzard efa manavao izao Tontolo izao ny Warcraft betsaka kokoa noho ny teo aloha lalao fa ilaina ny fifandraisana Battle.net. [object Window], ny zavatra, fixes sy ny hafa lehibe enhances no tsy nanampy na ovaina mba hanatsarana ny gameplay. Tsy tahaka ny hafa MMORPGs, ny quests ny WoW dia natao mba hanampiana ny leveling ary betsaka pleasurable. Tahaka ny tsy miverimberina toy ny ianao dia ilaina ho vonoina mitovy monsters sy ny sanda tsy miova travelling miverina sy forth miteny ho ampolony NPCs. Toy ny tena sy ny rehetra MMORPGs, WoW dia tiany ny lalao toe-karena sy ny ingame magazay/auction trano. Ny vola dia mifototra amin'ny varahina, volafotsy sy volamena. Izao tontolo izao Warcraft volamena dia tena iaraha-ampiasaina mba hividy fitaovam-piadiana, [object Window], ny zavatra, fahaiza-manao, fanoratana sy ny travelling. Raha mivarotra indray ny zavatra iray-BAHOAKA magazay dia mora, ny miverina dia unfavorable. Maro an'isa ny mpilalao hivarotra off ny tsy zavatra hafa mpilalao amin'ny taha ambony indrindra mihoatra noho ny zavatra NPCs dia hanolotra. PvP dia nisy aloha hatreto ny tena thrilling endriky ny ankamaroan'ny MMORPGs. Izao tontolo izao Warcraft ahitana PvP lohamilina ary tsy PvP mpizara. Araka ny Blizzard manohy ny fanavaozana ny lalao, ny vao haingana indrindra patch nahitàna ny ady zaridaina. Misy faritra aiza ny Horde sy ny Fiombonana no mampiray sy competes. Ny mpandresy dia hahazo manokana rewards sy ny fomba fampitomboana ny lohahevi-marika ny fivoarana. Blizzard dia naka hevitra avy amin'ny maro samihafa lalao sy mitambatra izany rehetra izany ho 1. Tsy mbola nisy aloha hatreto ny tena mahomby MMORPG io andro io ary mbola mitombo malaky. Amin'ny subscriber base ao 4.5 tapitrisa mpilalao world wide, Aho&#8217;m tokoa ny lalao dia mitohy hatrany ny malaza mihoatra ny folo taona. Raha toa ianao ka liana milalao Tontolo Warcraft na efa mpilalao ary mety tahaka ny fanazavana fanampiny momba ny lalao hilalao fitsidihana http://[object Window]://wow.tumeroks.com izao Tontolo izao Warcraft Review
･ World of Warcraft Review
Sokajy: Rehetra, Lalao, [object Window], [object Window], Manompo, Ny mpizara Tags: momba ny, [object Window], loko, hifandray, fifandraisana, mamorona, ny fiarahany, [object Window], ny toe-karena, [object Window], lalao, lalao, volamena, tantara, soavaly, trano, [object Window], hevitra, ny hevitra, [object Window], [object Window], atolotra, [object Window], [object Window], [object Window], manofa, [object Window], manompo, ny mpizara, fahombiazana, [object Window], tsy voafetra, mandresy, izao tontolo izao, [object Window]
Microsoft Fomba Fijery: Mpifindrafindra&#8217;s Tsiambaratelo Tombony
Ny Fomba Pos Barcode Scanner Afaka Hanatsara Ny Fandraharahana Fahombiazana
Atitany Design Software
Scheduling Hoazy Ny Kapila Fanadiovana
Nahoana No Zava-Dehibe Ny Mahita Ny Fizahan-Takila Ho Productivity
Soso-Kevitra Momba Ny Famoronana Lahatsary
Makà Fotoana Mba Hizaha Ny CCTV raki-teny
Hanintonana Sarobidy Fahatsiarovana Ny Zava-Kanto Fipoahana Scrapbook Toerana Fanamboarana Deluxe Software.
Auto Fizahana Ny Rafi Sy Ny Gps Teknolojia Raha Niara-Dia
CRM Essentials Ho an'ny Fandraharahana Madinika
Halako Adware! Mianatra Ny Fomba Esory Izany..
Mandahatra Ny Kahie Compuer Intsony! - Fiarovana sy ny Fikarakarana Torolalana ho an'ny Laptop Solosaina
Matihanina Styles Sy Ny Fahaiza-Manaon'ny Nandritra Ny Fampakarambady Mampiasa Ny Zava-Kanto Voakaly
Ny Lasa Sy Ny Ankehitriny Ny Solosaina